नाडा अटो शो उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न र व्यवसायीलाई उत्साही बनाउन केन्द्रित छ : अनुप बराल [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ १५, २०७६, १३:२७
भदौ १० गतेदेखि सुरु भएको 'नाडा अटो शो २०१९'को आज अन्तिम दिन हो। अटो शोको १४औं संस्करणमा अवलोकनकर्ताहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता भइरहेको छ। विभिन्न ब्रान्डका सवारीसँगै अटोमोबाइल्ससँग सम्बन्धित पार्टपुर्जासमेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ। यो वर्षको नाडा अटोको मुख्य आकर्षण, व्यवस्थापनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सचिव तथा प्रवक्ता अनुप बरालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
'नाडा अटो शो २०१९'को आज अन्तिम दिन। पछिल्ला ५ दिन सहभागिताका आधारमा कस्तो रह्यो र आजको अपेक्षा के छ?
नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा भदौ १० गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरू भएको ‘नाडा अटो शो २०१९’ को ५ दिन बितिसकेको छ। गएको ५ दिनमा हामीले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो प्रतिकृया उपभोक्ता तथा अवलोकनकर्ताबाट पाएका छौं। मेलामा सवारी तथा सवारीजन्य सामाग्री प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। दर्जनौं ब्रान्डले सहभागिता जनाएको प्रदर्शनीमा हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक गाडी तथा डिजेल/पेट्रोल इन्जिन गाडीहरु पनि सार्वजनिक गरिएका छन्।
प्रत्येक वर्षको अटो शोले उत्साह थपेर आउने गरेको छ। नेपालमा गरिने मेलामध्ये यो अटो सो सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बढी अवलोकनकर्ता सहभागी हुने शोसमेत हो। यो वर्षको अठो शोमा हाइब्रिड कारप्रति उपभोक्ताको धेरै चासो रहेको पाइयो।
आज अटो शोको अन्तिम दिन भएकाले आउन नपाएका उपभोक्ताहरुका लागि अवसरसमेत हो। त्यसैले आज अन्तिम दिन भएकाले अवलोकनकर्ताहरुको समेत उल्लेख्य सहभागिता हुने अपेक्षा नाडाले गरेको छ।
अघिल्ला वर्षहरु भन्दा यो वर्षको नाडा अटो शोमा के भिन्नता छ?
नाडा अटोको मुख्य उद्देश्य भनेको उपभोक्ता र बिक्रेतालाई एकै ठाउँमा जोड्नु हो। यसले एकै छानामुनि विभिन्न ब्रान्डका सवारी हेर्ने अवसर उपभोक्तालाई दिन्छ भने सवारी बिक्रेतालाई विभिन्न खाले उपभोक्तालाई एकै स्थानमा उपलब्ध गराइदिन्छ।
नयाँ-नयाँ सवारीको सार्वजनिकीकरणलाई बढी जोड दिएका छौं। यो वर्ष हाइब्रिड कार र ठूलै संख्यामा इलेक्ट्रिक सवारी प्रदर्शनीका लागि राखिएका छन्। भृकुटीमण्डपको साँधुरो ठाउँलाई अधिकतम उपयोग गरिएको छ। प्रदर्शनी स्थलमा आकाशे पुलसमेत बनाइएको छ। दुईपांग्रे, चारपांग्रे, स्पेयर पार्टस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छुट्टाछुट्टै स्टलहरु रहेका छन्।
यो वर्षको नाडा अटो शो ७५ हजारले अवलोकन गर्छन् भन्ने अनुमान थियो। त्यो लक्ष्य पुग्ने देख्नुभएको छ?
नाडाले अटो शोको तयारीबारे जानकारी गराउन गरेिएको पत्रकार सम्मेलनमा यस वर्ष कम्तीमा ७५ हजारले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। अहिलेसम्मको सहभागिता हेर्दा त्यो नाघ्ने देखिएको छ। पहिलो दिनमै अवलोकनकर्ताको उत्साहजनक सहभागिताले यसअघि नै लक्ष्यभन्दा बढी पुग्ने देखिएको थियो।
नेपाली बजारमा गाडी बिक्री केही घटेको देखिन्छ। नाडा अटो शोले सवारी बजारमा उत्साह थप्ला?
गत वर्ष गाडी बिक्रीदर नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा समेत घटेको छ। भारतमा अन्य कारण भए पनि नेपालमा भने कर र सवारी कर्जामा सरकारले लिएको नीतिका कारण यसमा असर परेको हो। महँगो करका कारण मध्यमस्तरका जनताको पहुँचमा सवारी पुग्न सकेको छैन। जसका कारण पनि अटो बजार उकालो लाग्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्र विकास हुने क्रममा रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा सवारीको बजार घट्नु वा स्थिर हुनुलाई सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्न। सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्छ।
५ दिनको अवधिमा अटो शोमा अवलोकनकर्ताको आर्कषण केमा देखिएको छ?
सबै स्टालहरुमा अवलोकनकर्ताको घुइँचो नै रहेको छ। गाडी आयातकर्ताले इलेक्ट्रिक गाडीमा केही बढी चासो राखेको पाएका छौं। इलेक्ट्रिक सवारीमा सरकारले भारी कर छुट दिएकाले वातावरणमैत्री सवारीप्रति उपभोक्ता आकर्षित भएका हुन्।
त्यस्तै, यो वर्षको अटो शोमा हाइब्रिडले धेरै अवलोकनकर्ताको ध्यान खिचेको देखियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर छुट दिएकाले हाइब्रिड कार आउने क्रम बढेको हो।
मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा अवलोकनकर्ताको त्यतिकै भिड रहेको छ। ७३ लाख रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल अटो शोमा राखिएकाले उपभोक्तालाई तानेको छ।
प्रिमियर लिगमा आर्सनल र एभर्टनको लगातार दोस्रो जित
क्रिस्टल प्यालेससँग स्तब्ध म्यान्चेस्टर युनाइटेड
चेन्नाईको विजयी सुरुवात
संविधान संशोधनभन्दा पहिले नेताहरु सुध्रिनुपर्छ : बलराम केसी [अन्तर्वार्ता] महामारीमा औषधि किन्दासम्म भ्रष्टाचार भएको कुरा आयो। यस्ता कुरा गुपचुप छ। अख्तियारले आयल निगमको जग्गा तामेलीमा राख्ने अनि मालपोतको कर... शनिबार, असोज ३, २०७७
मैले पीडा पिएकै कारण देश अगाडि बढिरहेको छ : रामवरण यादव [भिडियो वार्ता] राजनीतिक दलले एक अर्कालाई सम्मान गर्ने, विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक विधिबाट गयो भने संविधान सफल हुन्छ। लोकतान्त्रिक विधिलाई अंगिकार... शनिबार, असोज ३, २०७७
नेकपामा सहमति होइन, युद्धविराम भएको हो : रघुजी पन्त [अन्तर्वार्ता] केपीसँग कुनै गुणै छैन भन्ने कुरा त होइन। कतिपय अवस्थामा तपाईंका धेरै राम्रा कुराहरु एक/दुई वटा नराम्रा कुराले छोपिदिन्छ। सात प्रतिशत... शुक्रबार, असोज २, २०७७
प्रिमियर लिगमा आर्सनल र एभर्टनको लगातार दोस्रो जित आइतबार, असोज ४, २०७७
क्रिस्टल प्यालेससँग स्तब्ध म्यान्चेस्टर युनाइटेड आइतबार, असोज ४, २०७७
चेन्नाईको विजयी सुरुवात आइतबार, असोज ४, २०७७
असोज ६ बाट देशैभरका नदीमा बहाव बढ्ने, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह आइतबार, असोज ४, २०७७
नेकपामा सहमति होइन, युद्धविराम भएको हो : रघुजी पन्त [अन्तर्वार्ता] वीरेन्द्र ओली/डिबी खड्का